Baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qaabka 68 | Ragga Stylish
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa jecel inay isku dayaan boosaska cusub ee sariirta oo ay la kulmaan farxad aan la qiyaasi karin, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso qaabka 68. Xaqiiqdii weligaa adaa carbiyay 69. Waa meel si ballaadhan loo adeegsado oo caan ah tan iyo labadiinaba waxaad ku raaxaysanaysaan galmada afka oo fudayd iyo raaxo badan leh. Xaaladdan oo kale, qaabka 68 ayaa xoogaa ka duwan. Waxay ku saabsan tahay raadinta raalli ahaanshaha kaliya mid ka mid ah labada qof ee ku lug leh. Waa meel aad u xiiso badan oo leh natiijooyin gebi ahaanba cajiib ah.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato wax walba oo ku saabsan booska 68, kani waa boostadaada.
2 Tijaabo iyo khibrad
3 Booska 68 oo ah muuqaal kacaan ah
Daabacaadda 69 waa la yaqaan oo siyaabo kala duwan ayaa loogu dhaqmi karaa. Tan ugu caansan waa tan dumarka ee ninka dusheeda. Labaduba waxay wada heli karaan xubinta taranka isla markaana waxay awood u yeelan doontaa inay galmo afka ah isku mar sameeyaan. Waa meel aad u fiican oo mid siyaabo badan lagu ciyaari karo. Si kastaba ha noqotee, booska 68aad wuxuu doonayaa inuu siiyo raaxo qof keli ah.
Nidaamka qaabkani waa mid toos u toosan, maaddaama ay ku lug leedahay hal qof oo keliya. Mid ka mid ah xubnaha ayaa ku jiifsada dusha sare (ama sariirta ama sagxadda) oo wuxuu dhigaa lugaha oo laaban. Midda kale waa inay sidaas oo kale sameysaa laakiin dusha lamaanaha iyo dhinaca ka soo horjeedka. Haddii aad tahay kan sare, waxaad ogaan doontaa inay ku sugan yihiin boos wanaagsan haddii aad madaxa ku hayso bawdhooda. Taas bedelkeeda, haddii aad tahay kan hoose, waxaad ka heli doontaa xubinta taranka qofka kale afkaaga, ficil ahaan.
Muuqaalkani wuxuu qofka aad aad ugu riyaaqdaa ka dhigaa kan ugu sarreeya. Sanadkii '68, qofka ka hooseeya ayaa mas'uul ka ah inuu ka dhigo qofka kore inuu sida ugu macquulsan ugu raaxaysto afkiisa. Intaas waxaa sii dheer, faa'iidada ay siiso in ka badan 69 waa in qofka hoose uu gaari karo qeybaha dhow ee lamaanahooda aragti aad u kala duwan oo wanaagsan. Sidaa darteed, waxay awood u leedahay inay siiso khibrado cusub kuwa firfircoon iyo kan hela raaxada.
Dabcan waa jago inbadan isku dayeen kuna darsadeen jaangooyooyinkooda boosaska ficilka galmada.
Tijaabo iyo khibrad
Marka hore, haddii aadan isticmaalin muuqaalkan gabi ahaanba, waxay u badan tahay inuusan u shaqeyn doonin sidii la rabay. Waa macquul in qofka kore wuxuu ku jiraa boos xasilooni yar oo aan ku dhamaanayn raaxeysiga kaliya inaad ka fikirto inaadan dhicin. Waxa kale oo dhici karta in culayska qofka kor saaran uu dhib ku rido qofka hoose oo aakhirka ku dhammaado isaga oo aan ku raaxeysanin bixinta raaxada.
Si looga fogaado xaalado aan raaxo lahayn, waa inaad tijaabisaa si aad khibrad u hesho oo aad u ogaato waxa aan runtii jecel nahay. Tilmaam la siinayo si looga fogaado in miisaanka qofka kor ku xusan uu aad u dhib badan yahay kan hoose ayaa ah U janjeera xusulladaada si aad u yarayso cadaadiska uu saarayo culeyska jirkaaga.
Dhinaca kale ee nadaafad ahaanta ama bilicsanaanta waa xaddiga quruxda aan ku leenahay qeybahayaga gaarka ah. Rag badan ayaa timo badan ku leh dabada iyo xubnaha taranka. Haddii aad dooneysid inaad dul dhigtid lamaanahaaga afkiisa, waxaa wanaagsan inaad si buuxda u wasakheysato oo nadiif ahaato. Haddii kale, midka ka hooseeya waxay u noqon doontaa waayo-aragnimo xun labadaba timaha iyo urta laga bixin karo meelaha qaarkood oo aan haba yaraatee fiicnayn. Sidoo kale waa run haddii aad dumar tahay. Timo ka saarista kiisaskan ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
Waxaa lagugula talinayaa inaad tijaabiso oo aad baaris ku sameyso mowqifyo cusub si aad ugu ilaaliso kacsiga galmada lamaanaha. Waa inaan ogaanno waxa runtii nagu soo jiidanaaya oo na daaraya. Si tan loo sameeyo, waa inaan ku tijaabino dhulka oo aan dareemno dareenka ay na siiso. Khibradda qof kasta oo jagooyin kala duwan leh ayaa muhiim u ah in lagu raaxeysto. Sidoo kale waaya aragnimada lamaanaha guud ahaan. Waxtar ma leh khabiir ku ah booska 68 inuu ku sameeyo qof aan weligiis ku dhaqmin. Si tartiib tartiib ah ayey u socon doontaa.
Booska 68 oo ah muuqaal kacaan ah
Khabiiro ku xeel dheer cilmiga jinsiga waxay xaqiijinayaan in ay lagugula talineyso inaad marwalba raadsato jagooyin cusub ama aad ugudirto dhanka galmada. Waa inay noqotaa wax gebi ahaanba wacan oo xiisa leh mana u oggolaan karno inay noqoto mid keli keli ah. Xaqiiqdii waxaad leedahay lamaane aad dareentay in sixirku "lumay". Aad bay ugu badan tahay lamaanayaasha ugu casrisan inay ku dhacaan hal-ku-dheg.
Waxaan haysannaa dhammaan tas-hiilaadkii, raaxada isla mar ahaantaana waan ka mashquulsan nahay. Haddii aad tahay qof firfircoon oo shaqeynaya, waxay u badan tahay inaad haysatid saacado maalintii inaad ku kacdo wax kasta oo aad rabto ama ay tahay inaad sameyso. Tani waxay si weyn u saameysaa xiriirka galmada ee lammaanaha. Waxaa jira waqtiyo markii jidhku wuxuu u aqoonsanayaa ficil galmo inuu ku soo noqnoqdo caajis. Waxaan u yareyneynaa galmada kaliya raacitaanka orgasmka iyada oo aanaan ku raaxeysan howsha. Sidaa darteed, qaabka 68 wuxuu noqon karaa hub wax ku ool ah oo lagu soo celiyo hamigii lumay.
Caadi ahaan markaan isku dayno muuqaal cusub waxaan ku faraxsanahay helitaanka khibradaas cusub iyo dareenka. Haddii, marka lagu daro, waayo-aragnimadaasi ay tahay mid aad u wanaagsan, waxaan dooneynaa inaan ku celino waxayna naga dhigeysaa inaan dooneyno inaan galmo badan mar kale galno. Jinsigu aad ayuu caafimaad ugu yahay labadaba jawiga hoormoonka iyo xiriirka lamaanaha. Sidaa darteed, haddii mowqifka 68 aan maareyno inaan "soo nooleyno" ololka galmada, way fiicantahay.
Kadibna waxaan sidoo kale haysannaa noocyo muuqaal ah 68 oo aan ku sii baari karno. Qaar ka mid ah waxyaabaha galmada lagu ciyaaro ayaa la isticmaali karaa si aan ugu raaxeysanno xubinta taranka lamaanaheena isla markaana aan kor ugu qaadno khibrada. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa ciyaaro kala duwan sida isticmaalka kareemka, kareemka, shukulaatada ama nacnaca mentol si aad u kordhiso raaxada qofka kale la siiyo.
Muhiim ma aha in dadku marba marka ka dambaysa isla fal galmood ah sameeyaan. Waxaa laga yaabaa in maalin uun aad ku faraxsan tahay oo aad jeceshahay inaad bixiso raaxaysi iyo maalin kale oo aad rabto inaad hesho. Tani waa arrin dhadhan.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan uga ogaato booska 68.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Booska 68
Qaab caadi ah